Basakazela emakhaya abeKaya FM ngenxa yomsebenzi ohaqwe yiCorona
UDJ Thabo Mokwele selokhu asakazela ekhaya mhlazane kuqala ukuvalwa kwezwe Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | June 26, 2020
YIZE zivaliwe izindlu zokusakaza zeKaya FM kodwa ukusebenza kuqhubeka ngendlela ejwayelekile. Lokhu kushiwo yisitatimende esithunyelelwe imithombo yezindaba yiziphathimanda zalesi siteshi esizinze eGauteng.
Sithe batshele bonke abasebenzi ukuba baze bangalubhadi ezindlini zomsakazo izolo njengoba kunozakwabo otholwe enegciwane leCovid-19.
"Okusemqoka kakhulu kuthina impilo nokuphepha kwabasebenzi bethu. Njengezinyathelo zokucophelela, izindlu zokusakaza zeKaya FM zizovalwa okwesikhashana kusahlanzwa ibhilidi".
"Abasebenzi abenza umsebenzi osemqoka balulekwe ukuba bayozivalela bebe besebenza besemakhaya. Inkampani ihlela ukuhlola abasebenzi futhi ithungatha labo abasondelane nasebehaqekile," kusho isitatimende seKaya FM.
Siqhuba sithe kusukela kwaqala ukuvalwa kwezwe iKaya FM beyicophelela ukuthi iqikelela impilo yabasebenzi bayo ngesikhathi beqhubeka nokusebenza.
"Iziphathimandla ziqhamuke nohlelo likuba abasebenzi bangene ngokushintshana, kuvunyelwa kuphela abasebenzi abenza imisebenzi emqoka ebhilidini futhi abasakazi abanjengoThabo 'Tbose' Mokwele bebesakazela izinhlelo zabo emakhaya," kusasho isitatimende.
Kuthiwe ithimba elibhekene nomkhakha wezobuchwepheshe lenze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zeKaya FM, izindaba nezemidlalo zisakazwa abethuli bazo besemakhaya.
"Inhlosongqangi ukugcina konke okumayelana nokusakaza kuqhubeka njengasemihleni."
Umqondisi-jikelele weKaya FM, uGreg Maloka, uthe uyakuthemba konke okwenziwa yiziphathimandla zalo msakazo ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngohlelo.
"Nokuthi amathimba ethu aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi bethu ngaphandle kokuphazamisa ukulethela abalaleli balo msakazo abateketiswa ngele-Afropolitan ngezintsha. Umndeni weKaya FM ungungqaphambili, sizodlula kulokhu nawo sibambene futhi njengomphakathi jikelele," kusho uMaloka.
Esephetha uthe ithimba labezindaba bazolokhu bazisa abalaleli ngezindaba zakamuva ezithinta iCovid-19.